Odeeffannoo COVID19-Qoqqobbii Sadarkaa 4ffaa- Melbourne – Oromedia
Mootummaan Victoria tatamsa’ina COVID-19 to’achuuf qoqqobbii sadarkaa 4ffaa labsee jira. Qoqobbiin Victoria yeroo ammaa bahe kun baadiyyaa Victoria fi magaalaa Melbourbne keessatti kan hojii irra oolaa jiru akka armaan gadii ti.
Qoqqobbiin sadarkaa 4-ffaa(Stage 4) magaalaa Melbourne irra kaayamee jira, knarrati dabalamee Za’aa 8-galgalaraa hanga Za’aa 5 bariitti manaa bahuun dhoorkaadha
Qoqqobbii Sadarkaa 3-ffaa (Stage 3) baadiyaa Victoria irra kaayyamee jira.
Karoorri qoqqobbii laaffisuu fi tarakaanfiileen Victoria gara sadarkaa daandii Dandamata COVID (COVID NORMAL) deebisuu Coronavirus (COVID-19) roadmap to re-opening keessatti ibsamee jira
Qoqqobbii Sadarkaa 4-ffaa (Stage 4) naannoo magaalaa Melbourne irra kaayameeti tura hanga Ful-baana 13 sa’aa 11.59 halkanii . (13-Sebtember-2020)
Tarkaanfiin Jalqabaa naannoo magaalaa Melbourne keessatti Ful-bana 13 bara 2020 (13 September 2020) sa’aa 11.59 halkanii eegala.
Yeroo halkanii sa’aan manaa bahuun dhorkaa (curfew) sa’aa 9 galgala (pm) fi barii sa’aa 5 (am) gidduu fi sababoota afur qofaafis mana irraa deemta.
•Nyaata bitachuu fi waan si barbaachisuu kan biroof
•Sochii qaamaa (hulaan ala fi sa’aa murtoofteef)
•Kunuunsa kennuu, gargaarsa yookaan wal’aansa fayyaa barbaaduuf
•Dhoowamni manaa bahuu sa’aa 9 galgala (pm) irraa hanga sa’aa 5 bariitti (am).
•Guyyaatti sa’aa lamaaf sochii qaamaa godhchuuf mana kee irraa deemuu dandeessa
•Namootni lama yookaan maatiin tokko sa’aa lamaaf alatti wal arguu danda’u.
•Yoo ka kophaa jiraatu taate, yokaa maatii toko kan ilmaan umrrin ganna 18-gadii waliin jiraatu taaate, nama biraa tokko kan kan si laaluuf mana kee dhufu filachuu dandeessa. Yaroo cufa namuma san tahuu qaba. Atilleen mana nama sanii dhaquu dandeetta, yaroo nama san malle namni biraa guddaan hin jirretti
•Dirreen Taphaa ni banama
Tarkaanfii Lammataa: yoo dhukubni kun akka haarayaatti guyyuu dhibeen 30 hanga 50 naannoo magaalaa Melbourne keessatti guyyoota 14 kana hanga Ful-baana 28 bara 2020 argame, gorsa hogeessi fayyaa kennu irratti hundaawa.
Sababoota afur qofaaf mana irraa deemuun danda’ama :
•Sochii qaamaa (ulaa ala fi sa’aa murtoofteef)
•Sochii qaamaa fi waan si barbaashisu bitachuuf, mana kee irraa fageenya kilometirii 5 keessa tahuu qabda.
Yaroo kana irraa eegalee :
•Maatiin mana lamaa hanga namoota shaniitti mana keessaa alatti wal arguu ni danda’u.
•Ijoolleen Eegala Barmootaa (Prep) hanga Kutaa 2 gidduu jiran, VCE/VCAL fi kan mana barmootaa addaa (Specialist schools) termii 4-ffaa irrati barmoota deebiuq
•Oolmaan daa’immanii deebisee banama.
•Bakki dalagaa hedduun ni banaman.
•Bakki daakaa ni banaman, leenjisaan tokko hanga namoota lamaatti.
•Kadhannaa alatti wal gahamu hanga namoota shanii fi luba amantii tokko waliin ni hayyamama.
Tarkaanfii Sadaffaa: Yoo kan lakkoofsi dhibee haarayaa shanii gad ka tau tahe (guutuma herrega baadiyaa keessatti) fii dhibeen haarayni baka maddi isaa hin beekamnees hin jiraanne taate (guutuma herrega baadiyaa keessatti ) guyyoota 14-dabre keessa, fii yoo ogeesotiin fayaa irratti walii galan. Guyaan tarkaanfii kanaa kan gorsa ogeessoota fayyaatiin murtaawu taha.
•Manaa bahu dhoarkamuu fi mana irraa deemuu yookaan gageenya deemuu qabdu irratti qoqqobbiin hin jiru taha.
•Mana keessaa alatti hanga namoota 10 wal gahuu ni danda’u.
•Maatii mana biraa irraa si dubbisuu dhufan hanga maatii namoota shanii qabaachuu dandeessa. Maatii mana tokko keessaa tahuu qaban.
•Yoo lakoysni dhibee dhukubaa gadi hir’atee fi ogeessi fayyaa itti waliif gale baratootni Kutaa 3 hanga Kutaa 10 gidduu jiran mana barmootaatti tarii deebi’uu mala.
•Bakki gabaa fi refeensa yookaan dabbasaa (hairdresser) deebisanii ni banaman.
•Manni nyaataa fi manni bunaa teessuma ala hanga namoota 10 keessummeessuu danda’a.
•Isportiin alaa qaamaan wal hin tuqne kan namoota gurdguddaa bakkatti deebi’a. Isportiin alaa kanneen umriin isaanii wagga 18 gadi tahe (qaamaan wal tuqan fi wal hin tuqne) itti fufa.
Tarkaanfii Xumuraa: guyyaa 23-Sadaasa-2020 ( 23-ctpber-2020) irraa eegalee gorsa ogeessa fayyaa irratti hundaawee fi guyyoota 14 dabran keessa dhibeen dhukubaa haarayni hin mul’anne yoo tahee fi ogeessi fayyaas itti waliif gale..
•Alatti hanga namoota 50 wal gahuu ni danda’u.
•Mana keetti keessummoota hanga namoota 20 qabaachuu dandeessa.
•Bakki gabaa hundi ni banamu.
•Manni nyaataa fi manni bunaa ni banamu mana keessa namoota 20 kan teessisuu fi walumaa gala keessummoota hanga 50 qabaachuu ni danda’u.
•Nageenya isaa irratti hundaawee isportiin itti fufa. Isportiin qaama wal tuqsiisu kanneen umrii hunda keessa jiraniif ni banama.
•Wal-fuudhuu fi awwaalchi hanga namoota 50 irratti argamuu ni danda’an.
•Adeemsi amantii ni jalqabama, seera fageenya marsaa mitira afurii eegachuun
•Haala nageenyaa irratti hundaawee qoqobbiin ni laaffata yookaan ni kaasama.
•Namoota mana irraa dalagaa turaniif bakka dalagaatti deebi’uun ni eegalama.
•Wal-fuudhaa fi awwalcha irratti argamuuf lakoysni hin murteessamu.
•Wal-gahuu fi manatti walitti dhufanii wal dubbisuuf lakoysni hin murteessamu.
Qoqqobbii Sadarkaa 3-ffaa ka baadiyaa Victoria keessa hanga Ful-bana 13 bara 2020, sa’aa 11.59 halkanii ni jira (13-September-2020).
Baadiyaan Victoria Tarkaanfii Lammataa eegala. Tarkaanfiin Jalqabaa naannoo magaalaa Melbourne ilaala.
Tarkaanfiin Lammataa Za’aa 11:59 halkan Ful-bana 13 bara 2020 (13-September-2020) baadiyaa Victoria keysatti eegalama ,
Sababoota afur qofaaf mana irraa deemta:
•Hujii fii barmootaaf, yoo mana irra kan hin danda’amne taate.
•Yoo qofaa jiraatta tahe, yookaan qofaa kee ijoollee guddista tahe nama kan biraa tokko akka manatti dhufanii si dubbisan filachuu dandeessa. Manatti itti dhaqxees dubbisuu dandeessa, garuu yoo namni guddaan kan biro mana hin jiru tahee dha. Yeroo hunda nama ati filatte san qofa waliin wal agarta.
•Banama Mana Barumsaa teermii 4 ffaa keessa baratootni hundi gara mana barumsaatti deebi’uu eegalu
•Iddooleen bishaan itti daakanii fii dirreen taphaa ni banamu
•Kadhannaa alatti wal gahamu kan amantii hanga namoota shanii fi luba amantii tokko waliin ni hayyamama.
•Mana irraa deemuu fi fageenya deemamu irratti qoqqobbiin hin jiru.
•Namoota gurdguddaaf gara isportii qaamaan wal hin tuqneetti deebi’uun ni jalqabama. Isportiin alaa kan umriin isaan 18 gadi taheef kan (qaamaan wal-tuquu fi wal hin tuqne) ni jalqabama.
Tarkaanfii Xumuraa: Sadaasa -23- 2020 (23 November 2020) jalqabee gorsa ogeessa fayyaa irratti hundaawee fi guyyoota 14 dabran keessa dhibeen dhukubaa haarayni (godinaa guutuu) keessatti hin mul’anne yoo tahee fi ogeessi fayyaas itti waliif gale.
•Alatti hanga namoota 50 wal gahuu ni danda’u
•Mana keetitti keessummoota hanga namoota 20 qabaachuu dandeessa.
•Manni nyaataa fi manni bunaa ni banamu mana keessa namoota 20 kan teessisuu fi walumaa gala keessummoota hanga 50 qabaachuu ni danda’u
•Wal-fuudhii fi awwaalchi hanga namoota 50 irratti argamuu ni danda’an.
•Seera qaamaan wal irraa fageenyaa meetirii afurii irratti hundaawee sirni amantii ummataa itti fufa.
•Harka kee saamunaa fi bishaaniin yoo xiqqaate sekondii 20-iif dhiqadhu.
•Tishuu yookaan ciqilee kee keessatti qufa’i yookaan haxxifadhu
•Namoota kaan irraa wal irraa hiiqa gahaa tahe yoo xiqqaate meetirii 1.5 eeggachuu qabda.
•Ala deemta yoo tahe haguuggii funyaan fi afaanii uffadhu.
•Mana yaalaa deemii of ilaalchisi.
•Yoo si dhukube mana turi. Matii dubbisuu yookaan gara dalagaa hin deemin.
•Yoo mallattoo dhukubaa qabaatte laalami, gara manaa keettis kallattumaan yeroma san deebi’i.
•$450 Test Isolation Payment
•Kafaltii Hojii Hafuu Dhibee Daddabraa $1500 – $1500 Pandemic Leave Disaster Payment (PDF)
•haala dhukubaa, kan akka rakkoo gogaa qaamaa fuula irraa qaban, yookaan rakkoo afuura baasachuu yoo qabaatte
•Yoo konkolaataa keessa jirta tahe, qofaa kee yookaan maatii kee waliin jirta yoo tahe
•Yoo sochii qaamaa hargansiisaa godhchaa jirta tahe, garuu haguuggoo fuulaa qabattee deemuu qabda.